IVolendam - Idolobhana lendabuko lokudoba eduzane nase-Amsterdam | Ukuhamba kwe-Absolut
USusana godoy | | Amsterdam
Namuhla siya I-Volendam. Yidolobhana elincane lelo itholakala enyakatho ye-Amsterdam futhi lokho kunabo bonke ubuhle bendabuko yendabuko. Akudingeki ukuthi uthwale ngoba iyindawo encane, kepha bonke ubuhle bayo bugxile ezindaweni ezimbili. Elinye itheku kanti elinye idolobha lakhona elidala.
Kokubili kokunye, sizothola amakhona ahlukile. Bayosishiya sinambitheke kahle emilonyeni yethu futhi sizobuyisa izinkumbulo ezinhle. Ngenye ye- amadolobha amaningi okuvakasha yale ndawo nokuthi kunabantu abangaba ngu-22.000, abasagcina amasiko athile, benza iVolendam enye yezindawo zokuma ezibalulekile okufanele zibhekwe.
1 Ungafika kanjani eVolendam usuka e-Amsterdam
2 Yini ongayibona kuVolendam
2.1 Indawo ethekwini
2.2 IVolendam Museum of Arts
2.3 Umnyuziyamu womculo
2.4 IVolendam Labyrinth
2.5 Imifanekiso eqoshwe ethekwini
3 Ungadla kuphi eVolendam
4 Ukuthenga eVolendam
5 Izingubo zendabuko
6 Amaphathi amaningi adumile
Ungafika kanjani eVolendam usuka e-Amsterdam
Ukuze ufike eVolendam ungathatha ifayela le- ibhasi elisuka e-Amsterdam Central Station. Kuyindlela yokunethezeka kakhulu yezokuthutha. Lapho ungahamba ngebhasi elinolayini oya kule ndawo kanye namanye aseduze anjengeMarken njengebhasi 312 kanye no-316. Yize ungakhetha futhi amabhasi angu-110 no-118 azodlula e-Edam kodwa ame edolobheni lethu elikhulu namuhla . Ukuze ukwazi ukuvakashela amadolobha aseduze, une-voucher ebiza ngaphansi kwama-euro ayikhulu. Ngaphandle kwalokho, phakathi nendawo, uzoba nohambo lwakho oluya eVolendam.
Uma ukuhlala kwakho kuzokwandiswa ngesikhathi futhi une baqasha imoto, kunemigwaqo emibili okufanele icatshangelwe. Okokuqala, sizothatha iNieuwe Leeuwarderweg / N247. Ngemuva kwalokho, kuzofanele sixhumane nomgwaqo, iZeddeweg / N517. Ngaphansi kwengxenye yehora, uzobe usufikile lapho uya khona.
Yini ongayibona kuVolendam
Lapho nje sifika, siyakwazi ukubona ubuhle bendawo. Itheku yindawo esemqoka eVolendam futhi isibonisa umugqa wezindlu, owenziwe ngokhuni futhi onemibala egqamile. Ngaphandle kokungabaza, ukwakheka kwazo kujwayelekile endaweni, okusiyisa ezweni lamaphupho. Singabona nezikebhe ezahlukahlukene eziphambi kwazo. Kule ndawo, ungavele uthokozele izitobhi zokuqala. Hhayi ukuthatha izithombe kuphela, kodwa nokuhlala kwenye yezindawo zokudlela esizibonayo.
IVolendam Museum of Arts
Uma sesithandane netheku, sekuyisikhathi sokuthatha enye indlela. Ngalokhu, akukho okufana nokuqala ukuthola imigwaqo yayo, uze ufike kumnyuziyamu. Indawo futhi ekhethekile ngoba nansi yonke i- umlando wedolobha. Futhi, imibukiso ikufanele kakhulu. Kepha ungacabangi ukuthi kungenxa yendlu endala kuphela, kepha nokuthi abancane bazoyithokozela le ndawo. Ngaphezu kokuthola ubuciko, uzobona imvunulo ejwayelekile nemihlobiso eminingi. Kungenwa ngama-euro ama-3 kusuka ngo-10 ekuseni kuya ku-17 ntambama.
Ungathatha futhi uhambo lwe- Volendam umculo Museum. Yindawo encane kodwa egxila ekuqoqweni okubanzi komculo. Kusuka kumarekhodi kuya kuzinsimbi zomculo. Ukuyifinyelela, kufanele ukhokhe ama-euro angu-1.50.
Ibizwa nge-maze ngoba imigwaqo eyakhiwe mincane impela futhi zigcwele iziteshi. Ngakho-ke le yindawo enhle kakhulu futhi ekhetheke kakhulu. Uzobona izingqimba eziyingqayizivele nezihlotshiswe kakhulu, uzowela amabhuloho amancane futhi ujabulele ukubukwa ngombono ohlukile. Kuyindlela yokwazi inhliziyo yale ndawo.
Imifanekiso eqoshwe ethekwini
Siqala futhi siqede ukuvakasha ethekwini. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukuthatha isithombe ngezithombe ezimbili ezitholwe lapha. Zimbili abalingiswa abajwayelekile: intokazi netilosi. Enye yezinkumbulo ezinhle ezisethula kumasiko abo.
Ungadla kuphi eVolendam
Yize kuyindawo evakasha kakhulu, izindawo zokudlela azibizi kakhulu. Kukhona umehluko, njengomthetho, nedolobha elikhulu. I- Ukudla kwesintu, lapho inhlanzi ingumlingiswa oyinhloko, izohamba nathi lapho sithola amandla. Okubizwa ngeBistro Ouwe Helling kungenye yezinto ezijwayelekile endaweni. Uma ufuna ukudla ngokubukwa okumangazayo nethala elihle, i-Cathrien yindawo yakho. Indawo yokudlela yomndeni futhi etholakala ethekwini yiLunch Restaurant. Noma ngabe iyiphi indawo oyikhethayo, kufanele uzame ushizi noma uphaya we-apula.
Kanye Umgwaqo uDijk, uzothola izitolo eziningana. Okuthile ozokubona nxazonke ethekwini. Ngaphandle kokungabaza, lapho ungathola zonke izinhlobo zemininingwane njengezikhumbuzo. Vele, ngentengo engabizi kakhulu. Kuhlelo Umgwaqo uConijnstraat ungajabulela imakethe ngeMigqibelo. Kuzovulwa ngo-10 ekuseni kuya ku-17 ntambama.
Lapho sivakashela indawo enjengale, sithanda ukumunca lonke usiko namasiko aso. Manje yini eyejwayelekile ngokwesiko kunezingubo zakho? Abanye babahlali basagcina leso sitayela futhi kujwayelekile ukubabona bephethe i- izingubo ezijwayelekile. Into efuna ukwazi kakhulu ezokuvakasha. Ubuye ube nezindawo ezifana nemnyuziyamu lapho ungathatha khona isithombe ngesudi. Ngaphandle kokungabaza, okuthile okwehlukile ongeke ukukhohlwe ekuvakasheni kwakho.
Amaphathi amaningi adumile
Uma ufuna ukubona le ndawo ngokugcwele, iyiphi indlela engcono kunokuyivakashela isikhathi sokuzijabulisa. Okuvame kakhulu yilokho okuhlala izinsuku ezine. Ibizwa nge- "Volendam Kermis." Kwenzeka ngempelasonto yokuqala kaSepthemba. Edolobheni kubekwa izinto ezikhangayo kanjalo nezitebele zokudla ezahlukahlukene. Akunandaba ukuthi ubheka kuphi, le ndawo kufanele ibe yingxenye yeholide lakho elilandelayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Ukuhamba kwe-Absolut » IVolendam, idolobhana lendabuko lokudoba
Ukuqashwa kwemoto eMenorca